गित/संगित- हाम्रो खबर गित/संगित – हाम्रो खबर
“साइली” गितका गायक हेमन्त रानाले अमेरिकामा कसे लगन गाठो ! को हुनत हेमन्तको बेहुलि ? हेर्नुहोस
2021, May 20th, Thursday
गायक हेमन्त राना मंगलबार आफ्नाे प्रेमिकासँग बिबाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । अमेरिकाको पेन्सिलभेनियामा रहेकी प्रेमिका माया अधिकारीसँग उनले लगनगाँठो कसेका हुन् फिल्म निर्माता एवं संगीतकार समेत रहेका राना लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । उनले पछिल्लो समय ‘साइँली’ फिल्म निर्माण
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ हेर्नुहोस । काठमाडौ । प्रहरीले बैतडीकी भागरथी घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनले घटनामा संलग्ना स्वीकार पनि गरेका छन् । तर प्रहरीमा उनले दिएको बयान र भागरथीको भाई नाता
भाईरल मुस्लिमले, गाए इन्द्रेनीमा, दोहोरी, दोहोरी सुनेपछि कृण्ण कडेलले, अलिफलाई ईन्द्रेणीमै काम दिने निधो गरे- भिडियो हेर्नुहोस
भिडियो तलको समाचार,को अन्त्यमा राखिएको छ, कृपया पुरा, भिडियो हेर्नुहोला । धनुषा,माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोग अगाडि बढिसकेकाले निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि नसर्ने बताउनुभएको छ ।धनुषा, मिथिला नगरपालिका वडा नं ७ ढल्केवरमा सङ्घीय सरकार
काठमाडौ । प्रखर वक्ता तथा गायक रमेश प्रसाईको स्वर रहेकोअरबको खाडीमा’बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश उडेको युवाको कथा र पूर्वेली भाका समेटिएको ‘अरबको खाडीमा’बोलको गीतमा प्रेम” चौलागाईको शव्द, चर्चित गायिका मिलन नेवार र रमेश प्रसाईको
प्रखर वक्ता रमेश प्रसाईं र एलिना चौहान को आवाजमा नयाँ गित रेकर्ड ,हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
निकै नै चर्चीत वक्ता एवम् प्रखर वक्ता यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ्न । भर्खरै मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएका रमेशले पछिल्लो समय सुरेश गन्दर्भको “रिंकेबुङको राँगो” बोलको गीत गाएका थिए । उक्त गीतलाई दर्शक हरुले यति रुचाएकि, जुन गीत सामाजिक संजालभरी भाइरल
समिक्षा अधिकारी एक चर्चित नाम हो । उन्ले गाएको धेरै गीत हरु दर्शक स्रोता ले धेरै मन पराइसकेको छ । समिक्षा ले पछील्लो समय आफुले गाएक गीत मा आफु ले नै अभिनय गरेको देख्न सक्नु हुने छ। भर्खरी उन्ले धेरै
अन्जु पन्तको छोरी को पनि यति मिथो स्वर,छोरी लाई मोडेल बनाए पछि अफरै अफर .. भिडियो हेर्नुहोस..
काठमाण्डौ। गायिका अन्जु पन्त र उनकी छोरी परितोषिका पन्त एकसाथ मिडियामा आएका छन् । पन्तद्वारा पहिलो पटक सङ्गीतवद्ध ‘धेरै माया नदेऊ मलाई’ बोलको नयाँ गीतको प्रचार गर्ने हेतुले उनिहरु सँगै मिडियामा देखिएका हुन् । पन्तकै स्वरमा रहेको गीतको भिडियोमा गायिका
काठमाडौं । गायिका अन्जु पन्तद्वारा पहिलो पटक सङ्गीतवद्ध ‘धेरै माया नदेऊ मलाई’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक गरिएको छ । पन्तकै स्वरमा रहेको गीत गीतकार सुरेश वाग्लेले रचना गरेका हुन् । गीतको म्युजिक भिडियोमा गायिका पन्तकी छोरी परितोषिका पन्तको डेब्यु अभिनय
कृष्ण कडेल र टीका सानू बिच इन्द्रेणी कार्यक्रममा भयो यस्तो चर्काचर्की, हेर्नुहोस भिडियो..
इन्द्रेणी कार्यक्रमले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै टिका सानुल्र इन्द्रेणी कलाकार नभई चल्दैन भने पछि सामाजिक संजाल उनको तेस्तो भनाईको कोहि सहि त कोहि गलत बुझिएको पईयको छ । टिका सानुले इन्द्रेणी कार्यक्रम बाट चलेको होइन म आफै चलेको हो
आकाश श्रेष्ठ र पुजा शर्मा को अभिनय रहेको नयाँ गित “ऐसेलु पाकेर” सार्वजनिक भएको छ (भिडियो सहित) हेर्नुहोस
काठमाडौं । पछिल्लो समय निकै नै म्युजिक भिडियो देखिएका आकाश र पुजा शर्माको जोडीले यतिबेला नेपालि गुट संगीतको माहोल निकै नै तताएको छ । अनेक परिवेशका गित बजारमा आईरहेका बेला बिष्णु चामलिंग राईको शब्द सृजना लोकप्रिय गायिका मेलिना राई र